Ahoana ny fomba hamoronana rindran-damina maro indray mandeha?
Ankehitriny, ny rehetra dia mahafantatra fa ny backlinks dia tsy mitovy mihitsy. Ny tranoben'ny rohy dia fitaovana fanadiovana fikarohana tsotra mialoha ny fametrahana ny pensilihan'i Penguin. Amin'izao fotoana izao, raha manoratra lahatsoratra marobe ianao ary manolotra azy ireo any amin'ny tranonkala fanontana samihafa, dia tsy hanome valiny na hampisy sazy henjana ianao. Ary, tsarovy fa tsy misy olona mahafantatra izay hataon'i Google amin'ny manaraka. Isaky ny miezaka algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana ianao dia mila vonona ny hahazo sazy.
Na dia izany aza, tsy antony tokony hanajanonana ny fanaovana na inona na inona ho an'ny fametahana rohy - top cloud computing companies. Raha tokony ho izany dia mila mianatra ny fomba hanamboarana rohy avo lenta amin'ny fomba tsara.
Aza mino izay rehetra milaza fa maty ny trano rohy. Backlinks no tena fototry ny fananana. Na izany aza, ny raozy sy ny rohy ihany no mety hahatonga vokatra.
Ity lahatsoratra ity dia natao hizarana aminao toro-hevitra mahasoa mikasika ny fomba hananganana rohy amin'ny fomba azo henoina.
Ahoana no fomba hananganana fototra fananganana rohy mahasalama?
Alao sary an-tsaina hoe mamorona ampahany vaovao ianao ary te hampandroso azy amin'ny pejy Google finday. Satria fantatrao fa ny vokatra avo lenta avoakan'ny avo rohy avy amin'ny tranonkala kalitao, moa ve tsy hahatsikaritra ny famolavolana rohy tafiditra haingana araka izay tratra? Tsy mety ny manangana rohy maromaro mankany amin'ny votoatin-javatra vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Hetsika mampiahiahy ho an'i Google ireo hetsika toy izany. Ny vahaolana tsara kokoa dia ny hanampy an'i Google hahita sy hanondroana ny votoatiny. Haka fotoana kely izany fa hanana lanja bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Raha vantany vao voarakitra ny votoatiny, azonao atao ny manangona jiro organika ary manatsara ny fisainanao.
Ahoana no hanampiana an'i Google hahita sy hanondroana ny votoatiny?
Mba hampitombo ny dingan'ny fanivanana votoaty, azonao ampiasaina ny fitaovana Alexa. Ireo mpikaroka amin'ny tranonkala dia mijery ity tranokala ity amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mampiditra ny URL domains amin'ny fitaovana ampiasain'i Alexa ianao, dia hampidiriny avy hatrany ny pejy vaovao misy anao. Rehefa averinao jerena indray ny tranonkalanao, dia horesahin'ny Google koa ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkalanao.
Fomba iray hafa mahomby hanintonana ny botsika Google ho an'ny votoatinao dia ny mamorona ny angon-drakitra momba ny data. Azonao atao ny miasa ho anao satria ny media sosialy dia manampy amin'ny fampisintinana haingana sy ny fahitana. Izany no antony raha nalaza tamin'ny vohikalan'ny tambajotra sosialy ny votoatinao vaovao, manome famantarana ho an'i Google izany fa ny mpanjifa dia mahita ny kalitao anatiny sy ny rohy. Midika izany fa amin'ny fotoana hanombohanao hanamboarana rohy eksterna manodidina ity votoatim-baovaam-peo ity, ny rohy rehetra aterineto dia lasa organika.
Na izany aza, tokony mila matoky ianao fa mizara izay ilaina sy mahasoa amin'ny mpamaky votoaty satria ny lahatsoratra vaovao, lahatsoratra na rohy dia tokony hanome valiny fanampiny ho an'ny mpanjifa mety aminao.
Raha ny fitsipika nentim-paharazana, ny rindrin'ny tranokala nentim-paharazana, tsy ela dia tsy miraharaha ny endriky ny mpampiasa. Na izany aza, ny fahazoana fifandraisana tsara amin'ny jiosy sy ny fomba fijery voajanahary eo imason'ny milina fikarohana, tokony hifantoka amin'izay tian'ny mpihaino anao. Ny mpamaky anao dia tsy tokony hanenina fa manaraka ny rohy nomeny.